अब ओलीका लागि एमालेमै रहे पनि भीम रावलभन्दा लेखराज प्यारोः जिल्ला दौडाहामा सँगसँगै! - Malayakhabar
होम पेज फिचर अब ओलीका लागि एमालेमै रहे पनि भीम रावलभन्दा लेखराज प्यारोः जिल्ला दौडाहामा...
अब ओलीका लागि एमालेमै रहे पनि भीम रावलभन्दा लेखराज प्यारोः जिल्ला दौडाहामा सँगसँगै!
काठमाडौं:= दुईदिवसीय जिल्ला भ्रमणमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार झापा पुगे । चुनावी तयारीकै झल्को दिनेगरी भएको झापा भ्रमणमा ओलीसँग पार्टीका सांसदहरु, विद्यार्थी नेता तथा कलाकारसँगै थिए । साथमा थिए, पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट, जो अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छन् ।
ओलीले विगतमा नेकपा र सरकारमा अल्पमतमा पर्दा साथ दिएको भन्दै रामबहादुर थापा ुबादलुलाई बागमती प्रदेश र लेखराजलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए । १० बुँदेअन्तर्गत बादललाई प्रदेश इन्चार्ज मानिसकिएको छ । तर सुदूरपश्चिममा रावलले आफू संयोजक हुनैपर्ने आशयका साथ अडान राखेका छन् । भलै उनले व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा पनि समग्र १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि भनिरहेका छन् । तर १० बुँदे बल्झिनुमा सुदूरपश्चिममा रावल कि भट्ट भन्ने प्रतिस्पर्धा नै हो।
पहिला माधव समुहमा लागेर ओलीको बिरोध गर्दै राष्ट्रपति कार्यलयदेखि सर्वोच्च अदालत सम्म हस्ताक्षर गरेर हिँडेका रावल १० बुदे सहमति पछि एमालेमै रहेपनि अब उनलाई भट्टलाई जति स्पेस दिन नसक्ने ओलीको सन्देशबाट रावल असन्तुष्ट बनिरहेको देखिन्छ । उनले सुदुरपश्चिम प्रदेश ईन्चार्ज माग गरिरहेका छन् तर अध्यक्ष ओली त्यो दिन तयार छैनन् ।
अघिल्लो लेख अफगानिस्तानमा भोकमारी हुने राष्ट्रसंघको चेतावनी।
पछिल्लो लेख चुनावअघि कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन टार्ने दाउमा सभापति शेरबहादुर देउवा।